एमसीसी पास गर्न ओलीले गृहमन्त्री खाँणसंग राखे यस्तो सर्त, होलान त देउवा राजी ? — Sanchar Kendra
एमसीसी पास गर्न ओलीले गृहमन्त्री खाँणसंग राखे यस्तो सर्त, होलान त देउवा राजी ?
काठमाडौँ । एमसीसी पास गर्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले साथ् नदिने भएपछि नेपाली कांग्रेस अहिले ओलीलाई फकाउनतिर लागेको छ ।
प्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले निरन्तर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसंग छलफल र बार्गेनिङ्ग गरिरहेका छन् । यसैबीच ओलीले एमसीसी पास गराउनकांग्रेस नेता तथा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसंग एउटा सर्त राखेका छन्।
एमसीसीमा एमालेको समर्थन जुटाउन ओलीलाई भेट्न बुधबार विहान बालकोट पुगेका खाँणलाई ओलीले यस्तो सर्त राखेका हुन् । ओलीले एमसीसीका विषयमा एमाले स्पष्ट रहेको तर एमसीसी प्रक्रियामा सहभागी हुन पहिला एमालेलाई न्याय दिनुपर्ने सर्त राखेका छन् ।
‘गृहमन्त्रीज्यूले एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न सहयोग माग गर्नुभयो,’ एमाले अध्यक्ष ओलीका सञ्चार सहयोगी रामशरण बजगाँईले भेटवार्ताबारे भने, ‘अध्यक्षज्युले एमसीसीका विषयमा एमाले स्पष्ट रहेको तर एमसीसी प्रक्रियामा सहभागी हुन पहिला एमालेलाई न्याय दिनुपर्ने बताउनुभयो ।’
प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बस्ने बैठकमा एमसीसीबारे बहस हुँदैछ र बिहीबार नै अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ । सत्तारुढ पाँच दलमध्ये एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस मात्र रहेको छ । बाँकी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संशोधन नगरी एमसीसी पास गर्न नसकिने बताएका छन् ।
एमसीसीलाई लिएर सरकार अप्ठेरोमा परेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज गृहमन्त्री खाँणलाई सहमति जुटाउन एमाले अध्यक्ष ओलीकहाँ पठाएका हुन् । मंगलबार ओली आफै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए ।
‘संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेमाथि अन्याय भएको छ । कानून सबै दललाई समानरुपमा लागू गर्नुपर्नेमा त्यो गरिएन । हामीलाई न्याय दिनोस्, अनि मात्र हामी एमसीसी प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छौं,’ एमाले अध्यक्ष ओलीले गृहमन्त्री खाँणलाई भने ।
एमसिसीमा नेपाललाई होच्याउने, अपमान गर्ने कुनै कुरा छैन: केपी ओली
यसका शर्तहरूमा लगानी जनतामा हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्ने भन्ने आदि रहेका छन्। त्यसभन्दा अगाडि जब सन् २००२ मा यसको प्रारूप तयार हुँदैथियो, त्यसबेला राष्ट्रपति जर्ज बुसले भनेका थिए कि गरिब देश छ, तर त्यहाँ तानाशाही छ भने जनता दबाउन तानाशाहीलाई सहयोग गर्न सकिँदैन। त्यसकारण लोकतान्त्रिक प्रणाली हुनुपर्छ। यो एउटा शर्तको कुरा उनले गरेका थिए।
यिनै मापदण्डहरूका आधारमा सन् २०१२ मा एमसिसी अन्तर्गतको अमेरिकी डलर ५० मिलियन सम्मको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि नेपाल छनोट भएको थियो। त्यस पछि थ्रेसहोल्डका लागि चाहिने योग्यता पूरा भइसकेको मूल्यांकन गरेर २०१५ फेब्रुअरीमा अमेरिकी डलर ५०० मिलियन बराबरको सहयोग प्राप्त गर्न योग्यता पुगेको भनी कम्प्याक्टका लागि नेपाललाई छनोट गरिएको थियो।
सम्झौतामा काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सेफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटेसम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातामाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सीमानासम्मको खण्डमा ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बनाउने कुरा रहेको छ। यस्तै रातामाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सव-स्टेसन निर्माण गरिने, एमसिसीको सहायतामार्फत् प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करिब ३१७ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सवस्टेसन निर्माणका लागि ४०० मिलियन डलर हाराहारी खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
यस बुँदामा साथीहरूले अलिकति विवाद गर्न खोज्नुभएको छ। यसमा खासै विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन। यसबाट अप्ठेरो पनि केही पर्ने छैन। यसका सर्तहरू जो कार्यान्वयनमा अघि बढेका छन्। विद्युत प्रसारण लाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, जुन भइसकेको छ। विद्युत नियमन आयोग ऐन र यसको गठन गर्नुपर्ने थियो, यो पनि पूरा भइसकेको छ। प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने काम पनि पूरा भइसकेको छ। कानून मन्त्रालयबाट कानूनको मस्यौदामा राय दिनुपर्ने, यो पनि पूरा भएको छ।
निर्माणस्थलसम्मको पहुँच, जग्गाप्राप्ति र बन कटान भएको हुनुपर्ने भन्ने बुँदा थियो। यो काम क्रमशः भइरहेको छ। यसमा व्यवधानको विषय खासै भएन। अनि कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने छ, यो प्रक्रियामा छ। यसअघि नै अनुमोदन हुनुपर्थ्यो। सो नहुँदा अनावश्यक ढंगले विवाद पनि भयो र खर्च पनि हामीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। यसको लामो सिलसिला छ। अहिले म त्यतापट्टि जान चाहन्नँ।